शुक्र ग्रहमा जीव भएको संकेत - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
शुक्र ग्रहमा जीव भएको संकेत
२०७७ भाद्र ३०, मंगलवार ११:३०:००
खगोल शास्त्रीहरूले शुक्र ग्रहको वायुमण्डल देखिएको एक ग्यासका कारण त्यहाँ जीव भएको संकेत पाएको बताएका छन् । शुक्र ग्रहको बादलमा सूक्ष्म जीवको अस्तित्व हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।
त्यहाँ एक फस्फोरस र तिन हाइड्रोजनका कण मिलेर बनेको फस्फिन ग्यास भएको उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।
पृथ्वीमा फस्फिनको सम्बन्ध जीवनसँग हुन्छ । यो ग्यास पेन्गुइनजस्ता जानवरका पेटमा पाइने सूक्ष्म जीवहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ । दलदलजस्ता कम अक्सिजन हुने स्थानमा यो पाइन्छ । अक्सिजन नभएको अवस्थामा माइक्रो ब्याक्टेरियाले यो ग्यास उत्सर्जन गर्छ ।
फस्फिन कारखानाहरूमा पनि बनाउन सकिन्छ । शुक्र ग्रहमा भने कारखाना छैनन्, पक्कै त्यहाँ कुनै पेन्गुइन पनि छैन ।
उसो भए शुक्र ग्रहमा यो ग्यास कसरी हुन सक्छ ? त्यो पनि ग्रहको सतहभन्दा ५० किलोमिटर माथि । ब्रिटेनको कार्डिफफ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जेन ग्रिव्स र उनका सहकर्मीबिच यही प्रश्न उठेको छ ।
उनले नेचर एस्ट्रोनोमी नामक जर्नलमा एक लेख प्रकाशन गरेका छन् । त्यसैमा उनले शुक्रमा फस्फिन भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा उनले यो अणु कुनै प्राकृतिक वा जैविक कारणले उत्पन्न भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
यद्यपि वैज्ञानिकहरूको टिमले शुक्रमा जीवन भएको दाबी गरेका छैनन् । त्यहाँ जीवनको संभावनाबारे अरू तथ्य खोजिनुपर्ने औँल्याएका छन् ।
कार्डिफफ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ग्रिव्सको टिमले हवाईको मौना केआ वेधशालामा जेम्स क्लर्क म्याक्सवेल दूरबिन र चिलीस्थित अटाकामा लार्ज मिलिमिटर ऐरी दूरबिनको सहयोगमा शुक्र ग्रहमा दृष्टि दिएका थिए ।
त्यसबाट उनलाई फस्फिनको स्पेक्ट्रल सिग्नेचरबारे ज्ञान भयो । त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले शुक्र ग्रहको बादलमा यो ग्यास अत्यधिक मात्रामा भएको अनुमान गरे ।
शुक्र ग्रहबारे हालसम्म हामीकहाँ भएको जानकारी र त्यहाँको अवस्था हेर्दा त्यहाँ देखिएको फस्फिनको मात्रा जैविक उपस्थतिबिना भएको हालसम्म पत्ता लागेको छैन । यसको अर्थ त्यहाँ जीवनको संभावनाबारे विचार गर्न सकिन्छ ।
आईपीएलमा रोमान्चक खेलमा राजस्थानले पन्जाबलाई हरायो
प्रचण्डले ब्रेक लगाइदिए ओलीको तयारीमा
आईपीएलमा रोमान्चक खेलमा राजस्थानले पन्जाबलाई हराय...
काठमाडौंको टोखामा कोरोना संक्रमितको संख्या ८सय नाघ...
प्रचण्डज्यू ! तपाईँले भनेको सत्ता कब्जा यही हो, बु...